Rights Cloud - အချိန်နှင့်တပြေးညီပါဝင်မှုအခွင့်အရေးရှင်းလင်းမှုကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးပါ Martech Zone
Rights Cloud - အချိန်နှင့်တပြေးညီပါဝင်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးရှင်းလင်းရေးကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 10, 2017 ကြာသပတေးနေ့, မေလ 11, 2017 Douglas Karr
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက Chipotle သည် Sacramento patron အားသူတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး ၄ င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ The ဆိုင်းငံ့ဝတ်စုံ ၉ နှစ်တာကာလအတွင်းဒေါ်လာ ၂.၂ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဖြန့်ချိရေးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်နှင့်ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်သေချာအောင်ပြုလုပ်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပါ ၀ င်သောနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ရှောင်ရှားနိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်သည်။ ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုမီ!
FADEL သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အေဂျင်စီများအတွက်ကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်၎င်းတို့အသုံးပြုသောဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအခွင့်အရေးကိုခြေရာခံရန်ကမ်းလှမ်းမှုအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတီထွင်ခြင်းဖြင့်စျေးကွက်သို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိခြင်း၊ အခွင့်အရေးအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံချွေတာခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှောင်ရှားခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
အခွင့်အရေးတိမ်တိုက် လူကြိုက်အများဆုံးသို့ပေါင်းစည်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု Abode အပါအ ၀ င်အသေးစားအေဂျင်စီများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများအတွက်အသုံးပြုသောကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများ၊ OpenText, သေတ္တာ နှင့် Adstream.
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်မန်နေဂျာများသည်သူတို့၏အေးဂျင့်ဆက်ဆံရေး၊ တာ ၀ န်၊ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအပြင်သဘောတူညီချက်များ၊ ဖန်တီးသူများသည်ကြော်ငြာထုတ်လုပ်သည့်အရာများစွာကိုမော်ဒယ်များ၊ သရုပ်ဆောင်များနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများထံမှဂီတ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ကြော်ငြာများအထိလျင်မြန်စွာစစ်ဆေးနိုင်သည်။ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရှိ၊ အချိန်နှင့်အမျှအခွင့်အရေးများကိုရှင်းထုတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ၁၄ နှစ်အတွေ့အကြုံနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများမှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူခဲ့သမျှအားလုံးကိုကြော်ငြာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ယူဆောင်လာသည် အခွင့်အရေးတိမ်တိုက်။ FADEL တည်ထောင်သူ Tarek Fadel နှင့် FEK ကို၎င်းသည်လက်ရှိကြော်ငြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ရန်နှင့်အမြတ်အစွန်းများစွာကိုအလွယ်တကူပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ FADEL တည်ထောင်သူ Tarek Fadel နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်။
ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အနှစ်သာရကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကျယ်ပြန့်သောဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများစုဆောင်းခြင်းအပေါ်မှီခိုသည်။ သို့သော်လည်းအကြောင်းအရာများပြည့်နှက်နေသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်စိန်ခေါ်မှုများစွာသည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုနှေးကွေးစေပြီးစီးပွားရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အခွင့်အရေး FADEL အားဖြင့်တိမ်တိုက် ဤသည်မှာကြော်ငြာရှင်ကိုလွယ်ကူလွယ်ကူသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာများတွင်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည့်ပုံနှိပ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ ဗီဒီယိုနှင့်အခွက်တဆယ်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကြော်ငြာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေမှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပါ။
သန်းပေါင်းများစွာသောပြစ်ဒဏ်များ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သော PR စနစ်များအတွက်ကုန်ကျနိုင်သည့်မကိုက်ညီသောအကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုခြင်းမှအမှတ်တံဆိပ်များကိုကာကွယ်ပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်ရှယ်ယာ galvanize analytics ဒီပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးလိုင်းများမှတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာရှာဖွေခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
The Good, The Great, and Artificial Intelligence နှင့်အတူကြောက်စရာ